Reserve Bank of Zimbabwe: News & Videos about Reserve Bank of Zimbabwe - CNN.com
Zimbabwe introduces $500 million noteupdated: Fri Dec 12 2008 11:05:00
Zimbabwe's central bank is introducing a $500 million note -- the highest current denomination -- as the once-prosperous southern African nation battles against spiraling hyperinflation.
Can they outrun cholera?updated: Sun Dec 07 2008 18:51:00
Some Zimbabwean refugees who crossed into South Africa to escape a cholera outbreak still faced illness and disease.
Hyperinflation forces Zimbabwe to print $200 million notesupdated: Sun Dec 07 2008 18:51:00
Cash-strapped Zimbabwe revealed plans Saturday to circulate $200 million notes, just days after introducing a $100 million bill, Finance Minister Samuel Mumbengegwi said.
Zimbabwe replaces $10 trillion banknoteupdated: Wed Sep 17 2008 09:46:00
The Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ) has introduced a $1,000 note -- $10 trillion in the old value -- as the country battles to end cash shortages in the hyper-inflationary environment.
Zimbabwe introduces $100 billion banknotesupdated: Sat Jul 19 2008 15:57:00